Ukunakekelwa ngokufanele isikhumba samafutha.
Thatha ukulawula isikhumba samafutha
Ukunakekela isikhumba samafutha
Isikhumba yisibuko sempilo yomuntu. Yiso sonke isignali yokuqala ukuthi kukhona okungahambi kahle. Kudinga ukunakekelwa njalo, ukuthuthumela nokuziphatha okucophelela. Ikakhulukazi isimo somshini wesikhumba esikhungweni sobulili obuhle, abajwayele ukubukeka kangcono, enhle kakhulu, encane.
Ngokuvamile, inkinga enkulu yamantombazane ibizwa ngokuthi isikhumba samafutha. Lokhu kuyaqondakala, ngoba akusiwo wonke umuntu othanda ubuso obumnyama nama-pores awandisiwe. Iqiniso, isikhumba samafutha, akusiyo nje ukuqhutshwa okuqhubekayo, ngoba kunamathele emibimbi engakafiki, futhi akudingi ukunikezwa kwama-creams njalo. Kodwa umsebenzi wezinhlayiya ze-sebaceous awunxusa wonke umuntu.
Izimbangela zesikhumba samafutha
Uma unesikhumba samafutha, izizathu azihlali zifihlekile ekuzalweni. Ngokuvamile, umsebenzi osebenzayo wezingqungquthela ezisabekayo uhlotshaniswa nokuphulwa okuthile kwezitho zangaphakathi nendlela yokuphila. Kodwa ake siqale futhi.
oily enza isikhumba
Heredity. Lokhu kusho ukuthi uzokulwela isikhumba sakho yonke impilo yakho. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhetha izimonyo ezifanele, futhi futhi ukusebenzisa amaski okuqinisa nokugcoba. Isibonelo, ikhukhamba. Yiqiniso, njengoba ochwepheshe bekusho, inkinga ihamba ngokushesha lapho intombazane ifinyelela eminyakeni engu-25 ubudala.
Ukuphulwa kwangaphakathi. Kufanelekile ukuya kudokotela bese uhlola isimo samathumbu, ama-pancreas kanye ne-thyroid. Isizathu singazifihla ekucindezelekeni okuqhubekayo. Kulokhu, ukunakekela isikhumba samafutha kufanele kube mnene. Isibonelo, ungasebenzisa imaski ka-parsley.
Ukudla okungalungile. Ngeshwa, lesi yisizathu esivame kakhulu sokubonakala kwesikhumba samafutha. Zama ukukhipha ekudleni kwakho okunamafutha nokudla okumnandi, ukudla okusheshayo. Khumbula, abangane bangempela bobuhle bentombazane bayamakhomikhali, imifino, i-kefir. Futhi, ungayeki iphariji ekuseni.
Ukunakekelwa okungalungile kobuso. Ungasebenzisi kabi abahlanza abahlukahlukene abaqukethe utshwala. Yiqiniso, ukukhathalela kusho ukusetshenziswa kwabo, kodwa ngaphandle kokushiseka. Futhi, lahla ukucubungula njalo, ngoba kuzokwandisa ukuvikeleka kwe-sebum. Kungcono ukubeka lezi zimali isikhumba samafutha ngama-cubes ajwayelekile wokukhipha ama-chamomile amaqhwa kanye ne-masat oatmeal.
Indlela yokukhipha isikhumba samafutha
Ukugeza ngesikhumba samafutha
Ngakho-ke, ake sithi uyazi ukuthi unesikhumba samafutha. Yini okufanele ngiyenze? Impendulo ilula - shintsha impilo yakho. Uma inkinga ingelalifa, konke kungalungiswa. Kumele ushintshe indlela yakho yokuphila kancane, futhi ulandele imithetho eminingana. Ungaqala kusuka ekuqedeni okuyisisekelo - ukuhlanza isikhumba samafutha kufanele kwenziwe kuphela usebenzisa i-gel emnene noma i-foam kabili ngosuku. Ungabuye uphendule imithi yomuntu wonke futhi ekuseni ukuze wenze isiski esiwusizo sesinkwa se-rye, esinezakhiwo ezimangalisayo futhi uvumelanisa ngokuphelele ukukhululeka.
Uma unesikhumba samafutha, ukwelashwa akunakugwemeka. Kodwa isikhathi esiningi siyamnandi futhi asibizi kakhulu. Isikhali sakho kufanele sibe - indlela yokuphila enempilo, izimonyo ezifanele, imaski ejwayelekile yokubhekana ubuso. Yilokho konke - etholakalayo futhi elula. Ukwenza kube lula nakakhulu, ake sihlanganyele ezinye zokupheka.
Amaski asekhaya wekhanda lamafutha
Masks for isikhumba samafutha
Yiqiniso, imaski yasekhaya ihlale iyingcindezi, kepha imiphumela yabo ibalulekile. Kubalulekile ukwenza imaski ngendlela efanele futhi njalo. Ngokuvamile, inkambo iqukethe izinsuku ezingu-10-15, uma udinga ukwenza imaski ethile. Nazi izibonelo ezimbalwa:
Mask on imvubelo
Kubaluleke kakhulu ukuxuba zonke izithako bese uwasebenzisa kuphela ebusweni obuhlanzekile. Bamba imizuzu engu-15. Le mask ilawula ngokugcwele ukufihla kwe-sebum.
Flower honey - isipuni 1;
Imvubelo yesibhakabhaka - isipuni esingu-1;
Noma iyiphi ijusi elimuncu i-1 isipuni.
Okufanele kakhulu kunamapule, ama-apula anamanzi, okumele ahlutshwe futhi ahlanganiswe neqanda elimhlophe. I-mask isetshenziswa amaminithi angu-20 futhi ihlanzwa ngamanzi apholile. Ubhekana ngokugcwele nama-pores anwetshiwe futhi unciphisa ngokuphelele izigulane ezisabekayo.
Ama-apula - izingcezu ezimbili;
I-egg emhlophe - i-1 pc.
Ngakho-ke, kulula kakhulu ukuthatha amaphutha akho ngaphansi kokulawula futhi uwaenze afaneleke. Ngakho-ke, ngokwanele ukuba uvila futhi ukhononde ngokucabangela kwakho esibukweni, sekuyisikhathi sokuyithatha ezandleni zakho bese uyishintsha ibe ngowesifazane olungele kahle, ofanelekayo.
Kuyini i-botox ne-dysport: izinganekwane kanye neqiniso
Kunomanyolo entanyeni kanye ne-decolleté
Ukuzibandakanya kwengane enesahlukaniso
Inqubo enhle: ukugoqa nge-chocolate
Izitsha Zonyaka Omusha Okusheshayo Nesiphundu
Indlela yokubhekana nezinkinga zesikhumba ekushiseni: amathiphu amathathu avela ku-cosmetologists
Njengoba u-Vera Brezhnev ovela "ehlathini olubi" kwaphenduka uphawu lwezocansi lwebhizinisi lokubonisa ibhizinisi: izinkanyezi zokudla nokuqeqeshwa
Isobho se-isitshalo seqanda nesitshalo seqanda
Inkukhu ekhanda irayisi
Kungani ulinde owesifazane ovela kumuntu ononya?
"I-wave entsha-2015" ikhethe umqobi